Ukuphupha i-Cannibal Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neCannibal. Athetha ntoni amaphupha akho? Qhubeka ufunda eli nqaku ukuze ufumanise ukuba yintoni ingqondo yakho ezama ukukuxelela yona.
Ubuzimu, oko kukuthi, ukutya inyama yomntu, akwamkelekanga kuluntu lwethu. Abaninzi bafumanisa ukuba le ngcinga iyothusa kwaye izonyanyeka. Noko ke, kusenokubakho amaxesha apho abantu baphupha besitya inyama yomntu okanye bebona umntu ekwenza oko.
Anokuchazwa njani la maphupha oyikisayo? Zithini ngomntu ekuthethwa ngaye kunye nesimilo sakhe?
1 Uphawu lwephupha «ukutya kwabantu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «abatya abanye» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «abatya abanye» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukutya kwabantu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokoluvo ngokubanzi, isimboli yamaphupha inokuchazwa ngokuthe ngqo. Ngokutya inyama yomntu ephupheni, umntu ekuthethwa ngaye ufumana ubuchule kwaye amandla omnye.
Ngokusekelwe koku, iphupha linokuba luphawu lokuba kwixesha elizayo elingekude kakhulu uya kuba nalo mpu melelo kwaye iya kufeza izinto ezininzi.
Ukongeza, iphupha lokuba yi-cannibal lingabonisa nomnqweno wobudlelwane phakathi kwabantu. Umntu ekuthethwa ngaye ulangazelela ubudlelwane bothando okanye ubuhlobo nomntu othile kwaye ufuna ukuxhamla koku.
Ukuba, ngakolunye uhlangothi, i-cannibalism ngokwayo ivakalelwa kakhulu ephupheni, ibangela ukuba umntu ochaphazelekayo aqonde ukuba benza into engalunganga, oku kunokuba luphawu lokunganeliseki. Indlela ethile yokuziphatha oyifunayo kubomi bemihla ngemihla iyangqubana nezakho iinqobo ezisemgangathweni. Kunzima kuye ukuba amkele iinkalo ezithile eziphathelele yena aze azamkele. Nangona kunjalo, ukuba awuyifundi indlela yokwenza, awusoze ufezekise iinjongo zakho.
Uphawu lwephupha «abatya abanye» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwemigaqo yengqondo, i-cannibal ihlala ifanekisela abantu abanezinto. Ukuba naye uyatya iphupha, i-subconscious yakhe ibonile ukuba umntu othile kwindawo yakhe yangoku unomtsalane kwaye ufuna ingqalelo (yeemvakalelo) kuye. Oku kunokumoyisa umntu ekuthethwa ngaye, azive enyanzelekile kwaye ehluthwe isiqu sakhe.
Okuchaseneyo kuyinyaniso ukuba lowo uphuphayo uyidla inyama yomntu: kulemeko umntu oyifunxayo nguye, omnye umntu uziva ecinezelekile nguye kwaye ndinqwenela inkululeko ethe chatha.
Ukongeza, i-psychoanalyst uSigmund Freud wabona enye ingxaki kumaphupha e-cannibalism: ngokoluvo lwakhe, kungekhona nje ukuba kukho ubudlelwane obuyingxaki ebomini bomntu kuthethwa ngaye, kodwa kwangaxeshanye kubonisa I-quirk ebuhlungu Kwisimilo sakhe.
Isimboli yephupha «abatya abanye» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, i-cannibal ephupheni ifanekisela ukwamkelwa kwezinto ezithile buchule, oko kukuthi, umntu onomdla ufumana okuthile amandla kunye neepropathi.